दुर्घटनामा एकको मृत्यु - Pradesh Today दुर्घटनामा एकको मृत्यु - Pradesh Today
कार्तिक १०, २०७५ प्रदेश टुडे
तुलसीपुर, १० कात्तिक । बिहीबार मोटरसाइकल दुर्घटना परी घाइते भएका दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. १ फुर्केसल्लीका २८ बर्षीय नारायण घर्तीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । बिहीवार बेलुका ८ बजेतिर तुलसीपुरको १९ नम्वर बाहिनी पछाडि उनी सवार रा ४ प १७३८ नम्वरको मोटरसाईकल रोकिराखेको जेसिबीमा ठोक्किदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उनीसँगै मोटरसाइकलमा चढेका दंगीशण गाउँपालिका वडा नं. १ रावतगाउँका प्रवीण चौधरी भने सामान्य घाइते भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाईते भए लगत्तै घाइते घर्तीलाई उपचारको लागि राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा लगिएको थियो । उपचारको क्रममा बिहीवार बेलुका नै निधन भएको घर्तीको शवलाई शुक्रबार पोष्टमार्टम गरी परिवारलाई बुझाइएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ ।
तुलसीपुरमा बेवारिसे शव
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मिडिया चोक नजिक रहेको पुरानो बेस अफिसमा शुक्रबार कुहिएको अवस्थामा वेवारिसे शव फेला परेको छ । बालबालिकाहरु खेल्न जानेक्रममा गन्ध आएपछि उनीहरुले उक्त शवलाई देखेका थिए । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रकाश सापकोटाका अनुसार शवको पहिचान हुन नसकेपनि शवको हुलिया हेर्दा बजारमा मानसिक सन्तुलन गुमाएर हिड्ने व्यक्तिको हो भन्ने समेत बुझिएको र त्यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भैरहेको उनले जानकारी दिए ।
देउखुरीमा एकपछि अर्को बेवारिसे शव
जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा केही समय अघिमात्र विभिन्न मितिमा बेवारिसे शवहरु फेला परे । कति शवहरुको त पहिचानसमेत हुन सकेको छैन । देउखुरीको भालुवाङ नजिक रहेको भालुखोलामा असोज ३० गते करिब ५० वर्षका पुरुष व्यक्ति मृत भेटिए । उनको शव समेत पहिचान हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले बेवारिसे शव भनेर दाहसंस्कार ग¥यो ।
त्यस्तै राप्ती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा एकजनाको शव समेत फेला प¥यो त्यसको समेत पहिचान हुन सकेन त्यस लगत्तै देउखुरीमै एकजना व्यक्तिको शव भेटियो त्यसको समेत पहिचान हुन सकेन । यस्ता घटनाहरु सेलाउन नपाउदै पुनः देउखुरी क्षेत्रकै जंगलमा वेवारिसे शव भेटियो त्यसको समेत पहिचान हुन सकेन । यस्ता वेवारिसे शवहरु एकपछि अर्को फेला पर्ने र ति शवहरुको पहिचानसमेत हुन नसकेपछि त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति समेत बढेको पाईएको छ ।
बैशाख ०२, २०७७
ब्यवसायीक सुरक्षा आवश्यक
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा वृद्धि